दृष्टिकोण – Page7– News Of Nepal
-जानुका दवाडी यतिबेला सारा मानव जगत कोरोना भाइरसको त्रासमा छ । मानव भूगोल स्थिर अवस्थामा छ । विश्वका महाशक्ति देशहरु मानव अस्तित्व मेटिने पो हो कि भन्ने डरमा छन् । अर्थ, राजनीति, व्यापार र सिङ्गो मानव समाज कोरोना केन्द्रित भएका छन् । संसारका विद्यमान वादहरु वाद प्रतिवादमा नलागी कोरोना महामारीबाट कसरी..
स्वस्थ रहनका लागि खानपान र जीवनशैलीमा ध्यान दिनैपर्छ । लकडाउनका बेला मात्र होइन अरु बेला पनि यो कुरामा ध्यान दिनैपर्छ । तर, यो बेला मानिस घरमै बसिरहने भएकाले मानिस चलायमान हुन पाउँदैनन् । हिँडडुल बन्द जस्तै छ, भए पनि कम मात्र छ । दिनभरि घरमा वा कोठामा बसिरहँदा तनाव पनि बढ्छ । घरमै बसिरहँदा खाउँखाउँ..
मायामितु देश छाडेपछि देशको माया लाग्छ । आफन्त बिछोड हुँदा आफन्तको यादले सताउँछ । माटो पनि त्यस्तै रहेछ, माथि उक्लेपछि भुईँको याद आउने रहेछ । चैत १० गते । म आफ्नै वासस्थानमा कोरोना भाइरससम्बन्धी खबर ध्यान दिएर सुनिरहेको थिएँ । सन् २०१९ को डिसेम्बरको अन्त्यतिरदेखि यो भाइरसका बारेमा सुने पनि..
जतिबेला नेपाली नागरिकले राजनीतिका दाउपेच बुझेका थिएनन्, यो देश त्यसबेला शेरबहादुरले चलाए । उनले बोलेको त बुझिएन तर सांसद खरीद बिक्री भएको र पजेरो भित्रिएको थाहा पाउन उनको बोली बुझ्ने आवश्यकतै परेन । राजनीतिका जोडघटाउ बुझेर त्यसको तलतल लाग्न थालेपछि प्रचण्ड र शुशील कोइरालाले राजनीतिमा रमाइला रंग..
कृष्ण पौडेल हालै ओली सरकारले दुईटा चर्चित अध्यादेश जारी गरेको छ। ति मध्य एउटा आफ्नो पार्टि भित्रको किचलोको उपज र अर्को विपक्ष पार्टिसँगको किचलोको परिणामको रुपमा बुझिएको छ । संवैधानिक परिषद सम्वन्धि अध्यादेश त्यसमा प्रमुख विपक्ष दलका नेताको वखेडालाई तह लगाउने अभिप्राय स्पष्ट छ । अर्कोको राजनैतिक..
चीनमा जन्मेको कोरोनाले नेपालीहरु ज्याद्रा छन् भन्ने सुनेपछि नेपालीका विषयमा विस्तृत जानकारी संकलन ग¥यो । नेपालीले चीनमा बनेका मालवस्तु औधी मन पराउँछन् भन्ने कुरा कोरोनाले सबैभन्दा पहिले थाहा पायो । साथै थाहा पायो, नेपालीले बातबातमा भन्ने गरेको उखान जस्तो ‘मेड इन चाइना, आज छ भोलि छैन’ भन्ने..
-चन्द्रमान छन्त्याल व्यक्तिहरुमा निहित आ–आफ्नो निजि स्थार्थले गरिने व्याख्या र परिभाषा संग त मेल खांदैन नै । त्यसबाहेकको निर्मम सत्य भनेको कार्यकर्ताहरु सभ्य र सुसंस्कृत समाज निर्माणको एक असल उत्प्रेक मात्रै हुन । त्यसैले, यहां वास्तविक धरातलमा उभ्भिने र उभ्भिरहन सक्ने कार्यकर्ताको मात्रै..
-चन्द्रमान छन्त्याल प्रारम्भ मै ध्यान आकृष्ट गर्छू कि जल्लाद भनेर यहां साहै्र क्रुर तथा निर्दयी व्यक्तिहरुलाई भनिएको हो । र तिनिहरुलाई खबरदार ! हाम्रो प्रथम शर्त मानवता हो । जुनसुकै विधि पद्धति र प्रतिस्पर्धा नै किन नहोस्, त्यो मानवता अन्र्तगत पर्नुपर्छ । मानसिक रुपमा स्वस्थ मान्छेहरुले विवेक..
फुर्सद नहुँदासम्म सबैलाई फुर्सदको पर्खाइ थियो । फुर्सद नमिलेको बहाना थियो । फुर्सद नभएर केही गर्न पाइएन भन्ने गुनासो थियोे । फुर्सद भयो भने के के न गर्छु भन्ने लाग्थ्यो । कोही दिनभर सुत्छु भन्थे । कोही आँखा नचिम्लिकन पढ्छु भन्थे । कसैले घरधन्दा मात्रै होइन, देश नै बनाउँछु भनेर फूर्ति लाउँथे । तर यी सबै..
पत्रिकाविरुद्धको कोरोना आक्रमण
डा. कुन्दन अर्याल संयुक्त राज्य अमेरिकाका सञ्चारविज्ञ प्राध्यापक फिलिप मेयरले एघार वर्षअघि गहिरो अध्ययनका आधारमा आँकलन गरेका थिए, सन् २०४४ को मार्च महिनासम्म पुग्दा अखबारका पाठक शून्यमा पुग्नेछन् । उनले आफ्नो चर्चित पुस्तक द भ्यानिसिङ न्यूजपेपरमा सन् १९६० देखिको अमेरिकी अखबारहरूको प्रसार..